Izindaba - I-Downhole Drilling Vibration Resistance kanye ne-High Temperature Slip Ring Solutions
Amathuluzi we-Downhole adinga indandatho eshelelayo ukuze adlulise amandla nedatha futhi aqede ukugoqeka kwekhebula nokujikijelana ezindaweni ezinzima kakhulu zokubhola. I-AOOD njengomklami oholayo nomenzi wamasongo kagesi, ehlala egxile kokufunwayo kwakamuva kwamathuluzi wokumba phansi wamasilingi, ithunyelwe ngempumelelo emihlanganweni emikhulu yokusebenza kokudlidliza, izinga lokushisa eliphakeme kanye nemihlangano yezindandatho zokufaka ingcindezi ephezulu ku-MWD (ukulinganisa ngenkathi kubhola ) izinhlelo kanye nezicelo zokushisa eziphakeme zezimboni.
Izindandatho eziningi ze-AOOD ezisetshenzisiwe kumathuluzi wokumba we-dowohole enzelwe inkambiso, imangele ngokwanele ukumelana nanoma yikuphi ukushaqeka okukhulu, ukudlidlizela okuphezulu, izinga lokushisa eliphakeme nezindawo zokucindezela eziphakeme. Ukushisa okusebenzayo kufinyelela ku-260 ° C naku-MTBF (Mean Time Between Failures) kuze kube yizinguquko ezingama-60 million. Kulula ukuhlangana nokuqaqa, kungahlanganiswa nokushisa okuphezulu kanye nokuxazululwa kwengcindezi ephezulu nezimoto.
Uma udinga noma yiluphi usizo ngamasongo okushelela ekwakhiweni kwakho kwamathuluzi okwehlela phansi, sicela ukhululeke ukuxhumana sales@aoodtech.com.